02/07/2011 : Filoha RAVALOMANANA tao Antsirabe : "hanakantom-baravarana ihany koa ny ONU"
Nitafa mivantana tamin'ny vahoakan'Antsirabe ny Filoha RAVALOMANANA Marc androany nandritran'ny hetsika nandraisana ireo delegasiona avy any an-drenivohitra. Fankaherezana amin'ny fanohizana ny tolona no nampitain'ny Filoham-pirenena tamin'ireo vahoaka vory lanona tao amin'ny Kianjan'ny ara-dalàna Magro Antsirabe. Nampita vaovao mikaiska ny fahoriana mihantra amin'ny Malagasy ihany koa ny Filoha RAVALOMANANA Marc indrindra ny fikatonan'ireo masoivoho sasantsasany izay midika sahdy sazy ho an'ny Madagasikara.
26/06/2011 : Kabarin'ny Filoha Marc Ravalomanana (+ vidéo et audio)
22/06/2011 : Tsy hanaiky ny Ankolafy RAVALOMANANA
Mikasika ny volavolam-panintsiana nalefan’ny Dr. Salomao dia hentitra ny Filoha RAVALOMANANA fa « tsy iny no izy satria tsy mifanaraka akory amin’ny fehin-kevitra nivoaka tao amin’ny fivoriana tao Sandton Afrika Atsimo farany teo ny vorakitra ao anatiny ». Mazava tsara ny tapaka tao Sandton hoy ny Filoham-pirenena fa « tsy maintsy iaraha-mitantana ny tetezamita ary tokony afaka mandray anjara avokoa ny mpanao politika rehetra ahafahan miroso amin’ny fifidianana azo antoka . Izay indrindra no tsy maintsy hiverenako an-tanindrazana tsy misy fepetra”. Ny ao anatin’ity antotan-taratasy tamin’ny 17 Jiona ity anefa dia mbola mametraka fepetra amin’ny fiverenan’ny sesi-tany politika rehetra an-tanindrazana.
18/06/2011 : Izay sahy tokony miandry fifidianana fa tsy mampihorohoro
Hentitra kokoa noho ny isan’andro ny Filoha RAVALOMANANA Marc androany raha nitafa tamin’ny vahaoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka. Nomelohiny tanteraka ny fanelezana vaovao tsy marina etsy sy eroa izay manambara fa afaka amanankana ny fiverenany an-tanindrazana ny FATE. Nokianiny koa ny fahasahian’ny mpanao politika sasany milaza fa hiteraka korontana ny fiverenany an-tanindrazana.
Nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA Marc fa “izay mpanao politika matoky tena dia tokony hiandry fifidianana satria io no fitsaran’ny vahoaka ny asa natao hatrizay”. “Tokony hatsahatra tsy misy hatak’andro ny fampitahorana” hoy izy “sady tsy hisy hihemotra noho izany akory”. Nanome toky ny vahoaka ny tenany fa mahalala ny tokony hataony momba ny fitandroana ny ainy ka tsy tokony manahy ny amin’izany ny mpitolona. Isan’ny fandemen-tsaina ataon’ny FATE manko ny filazana fa handray fepetra avy hatrany izy ireo raha vao migadona an-tanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA Marc.
Taorian’ny lahateny nataon’ny Filoha RAVALOMANANA dia novakiana taminy ny tononkalo iray miarahaba azy amin’izao fetin’ny Ray izao. Tononkalo izay nosoratan’ny zokiolona iray mpitolona mitaky ny fiverenan’ny ara-dalàna eto Madagasikara.
17/06/2011 :Filoha RAVALOMANANA Marc : « Eto Madagasikara no hanaovana ny sonia farany » (+audios)
Nandritran’ny fihaonanan’ny vondron’olon-tsotra manohana ny Filoha RAVALOMANANA no nitafan’ny Filoham-pirenena tamin’izy ireo. Nitondra fanazavana mikasika ny zava-misy marina eo amin’ny sehatry ny fanelanelanana ny Filoha RAVALOMANANA . Tamin’izany no nanambarany fa « raha afaka mampitony ny hambom-pony ny tsirairay dia hivaha haingana ny krizy ». Tsy tokony hisy ny fifampiahiahiana eo amin’ny samy Malagasy araky ny fanazavan’ny Filoham-pirenena. Nanafatra ireo solontena avy ny amin’ny Faritra rehetra ny Filoha RAVALOMANANA mba hampahafantatra ny marina amin’ny mpiray tanindrazana rehetra mba hialana amin’ny fikorontanan-tsaina ateraky nny lainga afafin’ny FATE. « Ny olom-pirenena Malagasy tsirairay no tompon’ny fanalahidin’izao krizy izao fa tsy ny tenako irery » hoy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA.
Taorian’ny famelabelarana dia namaly ny fanontaniana rehetra nanitikitika ny olon-tsotra sy ny mpanao gazety nanatrika ny fotoana ny Filoham-pirenena . Nolazainy mazava fa hody eto Madagasikara ny tenany hanatanteraka ny sonia farany amin’ny sori-dalana rehefa vita ny fanintsiana ity farany .
13/06/2011 : Miantso amin’ny fahatoniana ny Filoha RAVALOMANANA Marc
Tsy hitsahatra hanome vaovao sy fanazavana arak'izay tratrany ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Nandritra ny tafa nifanaovany tamin'ireo mpiara-mitolona teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka no nonaovany izany fanomezan-toky izany. “Tokony ho tony daholo isika rehetra” araky ny nambaran’ny Filoham-pirenena “satria lehibe loatra ho an’ny Firenena ny fanambarana navoakan’ny SADC”. Tokony haneho fahendrena avokoa ny hery velona rehetra eto Madagasikara satria ny famahana ny krizy no tanjona fa tsy ny hifanenjika sy hamaly faty akory. Nambaran’ny Filoham-pirenena ihany koa fa halefa hankatoavina eo amin’ny vondrona Afrikana iny fanapahan-kevitra tany Sandton iny mba ho fantatr’izao tontolo izao tsara ny voarakitra ao anatiny.
09/06/2011 : « Tokony ny fanapahan-kevitra tamin’ny 20 May no ampiharina » hoy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA
Mila miverina an-tanindrazana aloha ny tenany araka ny nambaran’ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA raha nitafa an-tariby tamin’ny mpanao gazety ny tenany. Manaiky ny hanao sonia ny tondro-zaotra manko ny Filoham-pirenena raha toa ka omena ny Ankolafy tarihiny ny Praiminisitry ny tetezamita ary izy no hanendry izay hitana izany andraikitra izany rehefa eto an-tanindrazana ny tenany. “Mila misy fifandanjana ny eo amin’ny fitantanana ny fahefana n mpanatanteraka” hoy ny Filoha RAVALOMANANA “ka izay no mahatonga anay hitaky ny toeran’ny Praiminisitry ny tetezamita”.
Raha ny fizotran’ny toe-draharaha ankehitriny tokoa manko dia toa mbola I TGV ihany no tadiavin’ny SADC hapetraka hitondra ny tetezamita iombonana. Tsy hanao sonia ny tondro-zotra anefa ny Ankolafy RAVALOMANANA raha tsy mipetraka io fifandanjana eo amin’ny fahefana mpanatanteraka io. Raha ny fijerin’ny Filoham-pirenena ny mety ho tohin’ny fivorian’ny SADC any Sandton amin’ny 11 May kosa dia nambarany fa “tokony ny fehin-kevitra tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana tamin’ny 20 May no ampiharina”.
08/06/2011 : « Ankolafy Rajoelina avokoa ireo hery politika valo » hoy ny Filoha RAVALOMANANA (+vidéo)
En direct de Gaborone
Nitondra ny fahitany ny fizotry ny fifampidinihana tany Gaborone Botswana ny Filoha RAVALOMANANA taorian’ny lanonana famaranana omaly. Nandritra izany no nakasitrahany ny nitondran’ny filohan’ny SADC sy ny TROIKA ny dinika. Samy nohenoin’izy ireo avokoa manko ireo mpanao politika tonga tany an-toerana. Fanamarihana nentin’ny ankoLafy telo kosa hoy ny Filoham-pirenena ny momba ireo hery politika valo ankoatry ny ankolafy telo. « Ankolafy Rajoelina ihany daholo ireo » hoy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA « saingy nasaina nanangana vondrona politika mba hilazana fa maro an’isa ny mpomba azy ». Nomarihin’ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa fa efa nomeny ireo mpitarika ny SADC ny anaran’ireo gadra politika ankehitriny satria ny ankilany dia manantitra fa tsy misy intsony izany.